Davina Michelle uyo anotevera transgender paEurovision Song Contest? Duncan Laurence anoona candidacy! : Martin Vrijland
Davina Michelle uyo anotevera transgender paEurovision Song Contest? Duncan Laurence anoona candidacy!
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pa 27 May 2019	• 9 Comments
Maererano naDuncan Laurens, nyenyeri itsva Davina Michelle inofanira kutora mu Eurovision Song Contest gore rinouya panzvimbo yeNetherlands. Davina anoguma ne "a."Hungu uye zvakadaro?"Uye saka angave ari kudarika. Ndatsanangura mune zvinyorwa zvinyorwa (muenzaniso pano) iyo inodana iyo inopera mu a kazhinji inoshandiswa kune vanhu vanodarika.
Tatoona kuparidzira kweBGBTI paEurovision Song Contest mumakore achangopfuura. Parizvino gore reEurovision Song Contest, ikoko kwakaratidza kunge pasina vanyori vakananga.
Chii chakashata neicho? Hapana, kunze kwekuti zvinoratidzika kuti kusangana pabonde kunotanga kupinda mumakona makuru uye kuti kusunungura kunoratidzika kupedzisira kupararira mumapapaganda pamutengo wehutano hwevanhukadzi. Kuparadzirwa kwekare kwehupenyu hwevarume-vakadzi kunoratidzika kunge kunofanira kuparadzwa.
Saka mutungamiri wedender gore rinotevera? Rimwe risina ndebvu panguva ino uye nezwi revakadzi zvakare. Zvinogoneka zvose zvavo. Hapana chakakanganisika neizvozvo, kana iwe ukakumbira muvhareji weDutch munhu. Ndinongoda kukuratidza iwe Luciferian agenda iri shure kwayo. Lucifer anomiririra muraraungu (nyika itsva / nyika itsva), kuchinja kwehutano (bondexual / gender neutral). Transgenderism uye kushanduka kubva kuhutano hwekare hwepabonde kusvika kumitemo yeBGBTI inoita sevhara rekushandura kunotevera: kushandurirwa kune zvisizvo. Munhu se digital android ane ubongo en DNA mumutauro we5G (internet yezvinhu, umo iwe uchava chimwe chezvinhu).
Iwe unogona ikozvino kuseka ini uye vazhinji vanozozviona sechinhu chakachengetedza chekare kana chekusarura. Rega ndive akajeka: Handina chinhu chinopesana naDavina kana kuti chero ani zvake ane zvepabonde. Munhu mumwe nomumwe mweya uye isu tose tinoenzana. Saka handisi kusarura uye iyo haisi iyo nzira. Ndinongoda kutaura pamusoro pehupenyu hwandinofunga kuti ndinokwanisa kugadzirisa. Nheyo yenhare yaLuciferian (the aristocracy neVatican, iyo inodhonza zvidzidzo zviri shure kwevose vakanyadzisa demokrasi).
Nokushandisa mishanduriro ayo anoparadzira, nhare iyi inowedzera kuzivisa shoko rekuti tose takakwana. Ndiyo iyo inofanira kutumirwa. Vose vanoita zvematongerwe enyika vasingatendi nevanhurume mune rimwe dhigirii huru (5G). Zvisinei, shoko rokuti "akaenzana" rinoreva chimwe chinhu kunze kwechienzanidzo. Murume anongopesana nemukadzi. Izvozvo ndezvehupenyu. Kuenzana hakuna kuenzana. Zvisinei, aya mazwi maviri akafananidzwa pamwe chete mumashoko eOrwellian.
Zvechokwadi handigone kuratidza kuti Davina ndiye transgender uye kana zvaiva, hazvingave zvakanaka kana zvakaipa, zvakanyanya kana zvishoma. Kana zvisina kudaro, ndinovimba kuti haanzwi achizvidzwa. Handidi kugumbura munhu upi noupi, asi kungongoratidzira kune imwe tsika ndinotenda kuti ionekwe.
Ndiri kunetseka pamusoro pekuti kune zvakawanda zvakaparidzirwa kune LGBTI uye (mumakore achangopfuura kunyanya) nharaunda ye transgender. Saka kushungurudza kwangu ndekuti Davina anoshandiswa pane izvi uye kuti ichi ndicho chikonzero chokuti "akawanikwa" nemuimbi Pink, akabatwa naMarco Borsato naArmin van Buren uye iye zvino akaiswawo mberi naDuncan Laurence semubatanidzwa weEurovision inotevera song festival. Nguva imwe kunze kwezvirongwa zveterevhizheni umo Davina akanga atozviratidza.
Saka tinogona zvakare kuona shungu dzekugadzirisa zvirongwa zvemukati, iyo iyo vechidiki vari kugadzirirwa muitiro mutsva.
Chikamu chemashoko kubva munhanzi ye Skyward (Lyrics), umo mazviri pachena chokwadi chakavanzika chivande:
Kudya, kurara uye kufadza
Anozvimirira pamabvi ake
Pane zvakawanda kwaari
'Kusvikira vahosi vasingabvumirani
Inzwa kuti iye chaiye
Kunyangwe fake ichanyora chisungo chacho
Itai nzvimbo kwaari
Kana iye achasiya kudya kwose
'Kusvikira iye aine ganda senyuchi
Chii chakashata neyo transgender agenda kana kuparadzira? Iwe haufaniri kuwana chero chakaipa neicho. Mafungiro angu, zvisinei, ndeyekuti vanhu vazhinji vari kugadzirirwa kushandurwa kwepamutemo kuburikidza ne transgender kusvika kune vanhu. Nokuti izvi zvakakosha kuti muviri wemunhu uye uropi hurembera mugore, kuitira kuti uropi husati hwasangana chete muhurongwa hwekutonga, asiwo DNA inogona kugadziriswa paIndaneti.
Saka ndinofunga kuti tiri kugadzirira kuburitsa urongwa hwehudhidhi, patinenge tichifunga kuti tine rusununguko rwezvido zvepabonde zvevechidiki. Iwe unofunga kuti bhiriji iri kure kwazvo? Apo nguva yacho inosvika, haigoneki uye haugoni kuita chimwe chinhu pamusoro payo. Ndinongokupa maonero angu, pasina chinangwa chokukuvadza vanhu kana mapoka.
chinyorwa: sciencetimes.com, azlyrics.com
Duncan haakwanisi kuimba uye Eurovision Song Contest yakapfuura (LGBTI propaganda)
Muraravhe, i 'I Am' mu 'I Amsterdam', LGBTI uye kuzvipira pakati pe3
Ndeipi pesvedzero iyo Papa Francis nedzidziso yeKabbalah vane pahupenyu hwako hwezuva nezuva?
27 May 2019 pa 22: 00
Zvakare zvakare nyaya yakanaka yakajeka. Saka nekukurumidza akagoverana paFB ne Twitter asi kana tichimutsa makwai? Saka ramba uchienderera mberi naMartin.
28 May 2019 pa 02: 48
Kana iwe une zuva mazuva ano, zvakanakisisa kubvunza kana vachiunza chiremba chekuberekwa 😉
28 May 2019 pa 08: 08
World Health Organization inonyanya kukoshesa tsika-yekugadzirisa pamusoro pokudzivisa zvirwere zvemazuva ano, kuwedzera kutyisa uye kutamba mitambo kuChirangaridzo Chenyika Yose yezvirwere uye kubvisa transgenderism mukufamba kwakarurama mune zvematongerwo enyika.
.. uye kwechinguva
"Gender incongruence," kune rumwe rutivi, rwakasimudzwa kubva kune hutano hwepfungwa zvachose, kuva "mamiriro akaenzana nehutano hwepabonde." Tsanangudzo yeWHO inoramba ichichengetedza kupfuura dzimwe nyika "-" tsika dzepakati dzakasiyana-siyana uye zvisarudzo chete hazvisi chikonzero chekugovera chirwere chacho, "ICD-11 inoverenga, zvinoreva kuti haikwanisi kushandiswa kune vechidiki vasati vava kuyaruka uye intersex vanhu vari mumakumbo pamusoro pemitauro yakagamuchirwa kune imwe nzvimbo murugwaro, iyo inoreva kusiyana kwebonde iri" kusagadzikana kwepabonde kubudirira. "
28 May 2019 pa 17: 14
Inoshumirawo kuendeswa kwemajeri. Ruoko rwakavanzwa, somuenzaniso, rwakaita kuti hurumende dzive dzakakosha pane zvose zvingavaenderana nazvo! Zvechokwadi zvose zviri muhurongwa hwakagadzirwa nemhuri idzodzo zvinoparadza munhu wepanyama! Vanhu vanoziva nezvehupenyu huchazofanira kuzvibvunza pachavo kuti vanoda kufa sei! Nekukudzwa nehana yakanaka, kana semuranda wezvehupfumi uye se-cyborg uye mutsara! Mhuri dzinoedza kukudzwa hazvisiyi vanhu vasara (kana kuti chii chatinofanira kuenda nacho) chisarudzo! Mukuchinja kwavo nguva vachaputsa zvinhu zvose nekuparadza izvo zvichiri kumira munzira yavo!
29 May 2019 pa 12: 36
Kune wese anoti, "Hungu, asi ini handioni apulo yaAdam"
29 May 2019 pa 12: 42
29 May 2019 pa 12: 44
Your CT scan inowanikwa mubasa rako raAdamu rokubviswa kwemaapulo. Iyi kuongorora inokosha nekuti iyi ndiyo nzira chete yatinoziva nayo kuti matambo ako ezwi akaiswa sei maererano nekatekete.
29 May 2019 pa 12: 45
12 September 2019 pa 17: 33
Izvo zvakare zvakakanganisika neizvi ndezvekuti kugadziriswazve uye iyo yose kuraira uye mahormoni anodzoserwa zvakanyanya neinishuwarenzi yehutano, asi kwete, semuenzaniso, chiremba wemazino kana physiotherapy. Uye kana iwe semukadzi musina kana chero kugadzirwa kwechipfuva uye muchida kukwidziridzwa mazamu - zvisinei kuti ane hutano - hapana chaunodzoserwa asi varume vanoda kushandurwa vanoita. Pane saiti yandakawana kuti mazamu ari kuwedzera kuparadzaniswa panguva yekuvhiyiwa kwechipfuva kune varume vanotendeuka. Haukwanise kuiwana mushe. Zvimwe kana iye ari mune iyo feki.
Zvisinei, ini handinzwisise kuti iwe unoda kumedza mahormoni ngaakurege ugure uchinge uine hutano uye kuti inowanikwa yakajairika. Zvakanaka, izvo zvine hutano mumakotesheni. Zvichakadaro, iwo mahomoni ekuisira anokanganisa hutano hwako hwese. Funga kuti vachararama kushoma kwenguva yakareba, vaine njodzi yepamusoro yekenza.
« Dhiganho sarudzo dzinoguma mumwedzi we4 kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kuenda kuTimmermans? Votepi vanobiridzira!
Michael P. Thijs H. Jos B. nenyaya dzekuuraya mhizha dzinotungamirira mukusvitsa kwakakurumidza kwekutya mitemo inobata munhu wose »
Total Visits: 16.048.627
Ben op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1
Riffian op Utachiona hwe corona ('Wuhan virus') ine chiRungu patent: nhamba EP3172319B1